Ukwanda kwenyani kunye neNyani eyiyo iya kuba yinto efunekayo kurhwebo | Martech Zone
Ukongezwa kunye neNyani eyiyo iya kuba yinto efunekayo kwiRhwebo
NgoLwesine, Meyi 19, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Xa abantu bendibuza ngoqikelelo, ndiye ndibakhombe komnye umntu. Andililo ikamva elizayo, kodwa ndinerekhodi entle yokubona indlela inkqubela phambili yetekhnoloji eya kuba nefuthe ngayo ekuthengeni isimilo. Itekhnoloji enye endithe cwaka ngayo inyani engqinisisiweyo kunye nenyani yokwenyani. Konke kuhle, kodwa ndiyakholelwa ukuba siseneminyaka embalwa kude kusetyenziswe.
Ukuba uyivenkile yokuthengisa, nangona kunjalo, ndiza kuba nesibindi ekuqikeleleni ifuthe. Impembelelo I-ecommerce kunye ne-mcommerce inefuthe elikhulu kakhulu kuthengiso lweevenkile kunanini na ngaphambili. Ukuthengisa ngentengiso kuyaqhubeka ukuhla ... kwaye ayinakuthengiswa njengengxaki yezoqoqosho.
Abathengi bafunde ukwenza Thembela kwi-Intanethi. Kuthunyelwe ngemini enye kwiidolophu ezininzi, akukho sizathu sime kumgca kwivenkile yalapha kwakhona. Ukusuka kwivenkile yokutya ukuya kwiimoto, ukuhanjiswa kwe-Intanethi ukuya emnyango kuya phambili. Esona sizathu sokuba abathengi bengayamkelanga ngokupheleleyo intengiso kwi-Intanethi kukuba kusekho ukubamba kunye namava.
Kodwa inyani eqinisekisiweyo kunye nenyani yokwenyani ziya kuyitshintsha loo nto.
Ngelixa iingcali zeshishini ziqikelela ukuba umdlalo wokudlala kunye neendawo zokuhamba ukuze zixhamle kakhulu, ziyavuma ukuba iitekhnoloji zeVR / AR ziya kutshintsha indlela esithenga ngayo nathi. Kanye njengezixhobo zefowuni ezihlaziye iCommerce (Iiakhawunti zeMCommerce ezingaphezulu kwama-34% kuko konke ukuthengiselana nge-eCommerce kwihlabathi liphela), I-VR kunye neetekhnoloji ze-AR ziya kutshintsha i-eCommerce world esiyaziyo kwikamva elikufutshane.
U-Oleg Yemchuk, uQoqosho ngokuThengisa
Le infographic evela kwi-Maven E-commerce izisa inyaniso yale teknoloji ebomini. Nayi imizekelo embalwa apho ukungqinisiswa okwenyani kunye nokwenyani kubonelela amava angcono ngaphezu komgangatho wevenkile.
Ukuthenga ifanitshala entsha? Akusekho milinganiselo kunye nokuqikelela… sebenzisa ubunyani obungathandekiyo ukubeka iimveliso ngexesha langempela kwigumbi lakho.
Ukuthenga imoto? Kutheni ungangeni kwigumbi lokwenyani kumthengisi kwaye uvavanye imoto yakho elandelayo kunye nokwenza, imodeli, imibala kunye nezongezo ozifunayo. Kwaye ufumane ukhenketho olubonakalayo lwazo zonke iimpawu.
Ukuthenga iimpahla? Jonga ukuba ujongeka njani kubo ekhaya, nditsho nokuqinisekisa ubungakanani obufanelekileyo.
Ifenitshala ebonakalayo, iikhathalogu ezintywiliselwa ngokuntywiliselwa, ukuhanjiswa kweemoto, ukhenketho lwezithuthi, amagumbi okunxiba ... nantoni na enokwenzeka ukuphucula amava okuthenga ukusuka kwintuthuzelo yeofisi yakho okanye kwigumbi lokuhlala. Abathengisi abangayi kwamkela baya kushiywa ngokukhawuleza ngasemva. Abasebenzisi bayayiqonda loo nto, nabo. Kunyaka ophelileyo, abantu abathe inyani yokwenyani iya kutshintsha indlela abathenga ngayo inyuke ukusuka kwi-37% ukuya kwi-63%.
tags: arNyaniso eyongeziweyoeCommercegamificationukuthengiswa kweecommerceIikhathalogu ezihamba ngokuntywilaUOleg Yemchukamagumbi okunxibaIfenitshala ebonakalayondiphilaukhenketho lwesithuthivr
Hei Twitter, Ndizamile iiNtengiso kwaye nantsi into eyenzekileyo
Kutheni le nto uSnapchat ehlaziya ukuThengisa ngeDijithali